နည်းပြသစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ သတင်းထွက်လာခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို – MyMedia Myanmar
နည်းပြသစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ သတင်းထွက်လာခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ စပါးအသင်းကနေ အံ့အားသင့်စဖွယ် ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ နည်းပြဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုဟာ လက်ရှိမှာ အသင်းလက်မဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားခဲ့ရပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ကတော့ နည်းပြအလုပ်ကနေ အနားယူစရာ မလိုအပ်ပဲ ဘောလုံးနယ်ပယ်ထဲကို အနှေးနဲ့အမြန် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးနောက် နည်းပြသစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ ဟန်ပြင်နေတဲ့ စကော့တလန်ကလပ် ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ပါ သတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Photo Credit : Yahoo! Sport
ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကလပ်အသင်းတိုင်းမှာ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ စပါးအသင်းကိုတော့ (၁၇)လ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပေမယ့် ဆုဖလားတွေ ရရှိအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပဲ အသင်းကိုပါ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရအောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်းနေရတာကြောင့် အသင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့က ခဲယဉ်းလာခဲ့ရကာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အသင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်ရင်ဟိုကတော့ အချိန်အကြာကြီး အနားယူသွားမှာ မဟုတ်ပဲ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဘောလုံးလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့မယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ မော်ရင်ဟိုဟာ အသင်းအတွက် အမြဲတမ်းနည်းပြသစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ နေးလ်လန်နွန်နဲ့ လမ်းခွဲထားခဲ့တဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းဟာ လက်ရှိမှာတော့ အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ ဂျွန်ကနေဒီကို အသင်းရဲ့ ယာယီနည်းပြအဖြစ် ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီကုန်ဆုံးချိန်အထိ တာဝန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရာသီအကုန်မှာတော့ နည်းပြသစ်တစ်ဦးနဲ့ အစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆဲလ်တစ်အသင်းဟာ လတ်တလောမှာ မော်ရင်ဟိုနဲ့ သတင်းထွက်နေပေမယ့် မော်ရင်ဟိုရဲ့ လုပ်ခလစာ မြင့်မားလွန်းမှုကြောင့် အသင်းနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့က မလွယ်ကူနိုင်တောကြောင့် ဘုန်းမောက်နည်းပြဟောင်း အက်ဒီဟောင်းကပဲ ဆဲလ်တစ်နည်းပြသစ် ဖြစ်လာနိုုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါ်တို ချယ်လ်ဆီး အင်တာမီလန် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ စပါးတို့လို ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မော်ရင်ဟိုကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ချင်နေတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေ များစွာရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဘွန်ဒစ်လီဂါမှာလည်း နည်းပြသစ် လိုအပ်နေတဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းတို့ပါ ပါဝင်နေတာကြောင့် သူရဲ့အသင်းသစ်က ဘယ်အသင်း ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
The post နည်းပြသစ် ခန့်အပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းနဲ့ သတင်းထွက်လာခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-04-21T12:01:09+06:30April 21st, 2021|MYSPORT MYANMAR|